Auto ribonucleic A | izinzuzo nemibi
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Auto ribonucleic A | izinzuzo nemibi
I "credit ezijikelezayo okuzenzakalelayo", ukuze ezikhanyisayo ngokuzenzakalela credit yonke ibhalansi etholakalayo ekhadini, inkonzo evumela ukukhokhwa nyangazonke cishe yomugqa oqondile isisekelo. Uma usebenzisa othomathikhi credit ezijikelezayo, noma ngabe yezitolo yenkokhelo yinhlama-sum esitolo futhi esitolo inetha, liyoshintshwa ukuze udumo ezikhanyisayo nhlobo ngesikhathi sokukhokha ngokuzenzakalelayo.
hhayi isevisi kungabonakala zonke izikhungo zezimali, kodwa eziningi ezezimali umthengi kanye credit card inkampani, unikeza isevisi efanayo. Uma ufuna ukusebenzisa othomathikhi credit ezijikelezayo okungukuthi, ake uhlole imininingwane yaleyo naleyo nhlangano yezimali ngaphambi kokuba ubhalise.
okuzenzakalelayo credit ezijikelezayo izinzuzo
othomathikhi credit ezijikelezayo, ngoba nyangazonke Inani le-invoyisi kuyinto kakhulu njalo, kukhona sokunconywa ezifana "Kulula ukusetha icebo ukubuyiswa kwemali." Futhi ngenyanga ezayo ngesamba semali invoyisi uma ubheka incazelo Ungakwazi ukubikezela, ukuze kungatholakali at an ezengeziwe, futhi kulula ukubikezela ethize pay off isikhathi.
Futhi, inkulumo ehunyushwa ngokuthi "lula ukwehlisa umthwalo senkokhelo nyangazonke", uzobe okuthiwa yayisemngceleni izinzuzo. Ngokuqhathaniswa enjalo yinhlama-sum lokukhokha nenkokhelo 2-nini, ngisho nalapho i-yokuthenga nzima okwandisa umthwalo nyangazonke, bekuyoba lula ukuvikela uhlelo buyiselo usethe kusengaphambili.
inkomba | nemibi
credit othomathikhi yelangabi ephenduphendukayo ezikhanyisayo Ikhredithi izinzuzo
othomathikhi ezijikelezayo credit kusimo iyona ephakeme inani lezikhathi yokusetshenziswa ukwanda, "iphuzu okuyinto nzima ukuwaqonda ibhalansi zamanje". Uma usebenzisa ikhadi ngaphezu, inqobo nje uma i-nyangazonke ukubuyiswa kwemali mali ayeqi imali entsha, ngeke kube ngenyanga ezayo esele kuyehla.
Ngokwesibonelo, yize phindisela yen 5,000 njalo ngenyanga, ekhadini 5, Lapho yi ku shopping engaphezu kuka 000 yen, lidlule phakade ngisho noma ukubuyiswa kwemali uyowela isimo, ezifana aluphelanga.
Ngaphezu kwalokho, i-credit ezikhanyisayo kuthatha predetermined senzalo Imali lizokhokhiswa okuyinto kwanezelwa nyangazonke yokukhokha eyinhloko. Kusukela Ikhomishini iphindze kukhuphuke ngo ukuthi lemali kulapho ibhalansi, uzodinga ukuba banake ukuthi iphuzu.
inkomba | demerit
othomathikhi credit ezijikelezayo ka ezikhanyisayo credit kanjani ukusizakala?
Ngo eziningi izinkampani ezezimali umthengi futhi credit card, kanye kwase kumiswe credit ngokuzenzakalela ezikhanyisayo, isibe uhlelo kwenziwa ngumfakisicelo. Ngakho-ke, Uma nazi ukuhlola esifakiwe, "kunzima ukukhokha off izinsalela manje", cabanga ukukhokha inani okunethezekile lemali konke ngesikhathi esisodwa.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba enze uhlelo ukubuyiswa kwemali, uyophinde abe ebalulekile ukwenza uhlelo ukusetshenziswa kwekhadi le-credit ezikhanyisayo. Uma isinqumo ukuvinjelwa lemali ukusetshenziswa imali uwedwa, kuyothiwa sinciphise amathuba ukuthi isikhathi sokukhokha nokunwetshiwe ngeze. Ngenxa yalesi sizathu, njalo uzijwayeze kokusetshenziswa sebhithi ezinjalo, cabanga indlela osebenzisa ngayo imali nyanga zonke, njengokuthola kancane kancane ukunciphisa uthishanhloko.